Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Afraffaa -
Berhanu Hundee, Caamsaa 24, 2019
Barreeffama kutaa sadaffaa keessatti tooftaalee humnootni farra – Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) ittifayyadamaa jirani fi gargaarsa isaan mooraa Oromootii argatan laalchhisee waan tokko tokko dhiyeesseen ture. Akkasumas adeemsi OPDO duraanii fi ODP ammaa QBO ni gargaara moo faallaatu hojjetamaa jira jedhee gaafii kaasee; garuu dhimma kana akkan bal’inaan ittideebi’u bulcheen ture. Barreeffama kutaa afraffaa kana keessatti adeemsa ODP laalchisee waanan hubachaa jirun dhiyeessa.
← OPDOn Weerara Ijibbaataa fi isa Dhumaa Oromoo fi WBO irratti Deemsaa jirti የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ሁለተኛ ዙር፥ ክፍል አራት →